Ragga maxay ka fikiraan? Quraafaadka iyo runta | Ragga Stylish
Ragga maxay ka fikiraan? Waa wax soo mara madaxa dumarka badankood. Gaar ahaan markay isku dayaan inay ogaadaan waxa ragga ka fakaraan markay ka fikiraan dumarka kale. Waxaa jira xaddi badan oo macluumaad ah oo isku dayaya in lagu xalliyo jahwareerkan hab macquul ah. Taasina waxay tahay in haween badani u maleynayaan in ragga ay ka fikiraan galmada maalinta oo dhan. Intaas ka sokow, raggu waxay noqon karaan kuwo aad u adag sidoo kalena fudud. Wax waliba waxay kuxiranyihiin qofka aan ladhaqmayno.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno waxa ragga ka fikiraan oo aan ku siino xoogaa xal ah kuwa ugu caansan iyaga.
1 Ragga maxay ka fikiraan?
2 Rag xaasid ah
3 Ragga maxay ka fikiraan? Shukaansi iyo jacayl
4 Ragga iyo ballanqaadka
Shaki weyn ayaa ah in dumarka oo dhan ay isweydiiyeen waqti ka mid ah noloshooda. Ka dib sahanno kala duwan, daraasado iyo buugaag la daabacay, waxa ugu muhiimsan magaca ayaa bilaabmaya in la arko: isgaarsiinta. Shukaansiga, xiriirka jaceylka, galmada iyo guurka way is khilaafeen iyadoo lagu saleynayo tirakoobka la helay intii lagu jiray baaritaanka. Qaar ka mid ah tirakoobka ku saabsan ragga daraasadaha qaarkood waxay muujinayaan xog la yaab leh.
Ragga badanaa waxay jecel yihiin qoyska lammaanahooda. In kasta oo ay jirto mowduuc sodohda ah oo jiran, inta badan ragga waxay jecel yihiin sodohdo iyo qoyska intiisa kale. Ragga sheegta inaysan raali ka aheyn qoyska lamaanaha waxay ka yimaadaan dareen ah inaysan fiicneyn oo ay u qalmaan lammaanahaas iyo inay si joogto ah aqoonsi uga raadinayaan qoyska. Waxay sidoo kale dareemaan in laga reebay nolosha qoyska ama ay dhibaato ka haysato faragelinta arrimaha shaqsiyeed ee qoyska.
Raggu waxay doorbidaan haweenka kedis ah oo welwelsan. Ragga badankood waxay yiraahdaan waxay doorbidaan inay yeeshaan shirkad haween ah oo deggan. Maxaan ragga aad u neceb nahay waa aakhirkii. Taasi waa, haweeneydu waxay had iyo jeer dhahdaa "tani waa markii ugu dambeysay ..."
Rag xaasid ah
Muuqaalka xun ee rag badani ku nool yihiin amni darada mid waliba waa in aysan jeclayn in lamaanayaashood ay saaxiibo yeeshaan. Asxaabta waxaan ula jeednaa rag kale oo asxaab ah. Rag badan ayaa maseyrsan oo aan ku maaweelin markay lamaanayaashoodu leeyihiin rag saaxiibbo ah. Intooda badan intooda badan waxaa sabab u ah masayr fudud qaarna waxay ka baqayaan inay waayaan lamaanahooda maxaa yeelay qofka kale ayaa isaga ka wanaagsan. Halkani waa halka aan ku aragno amni-darrada ay rag badani qabaan, oo lid ku ah waxa ka muuqda. Ragga badankood waxay umuuqdaan kuwo aad isku kalsoon, laakiin xaqiiqadu waa cagsigeeda.
Kaliya qayb yar oo ka mid ah tirada ragga ayaa tixgelisa inay tahay mid aan dan ka lahayn joogitaanka ragga saaxiibbada ah ee nolosha lamaanayaashooda. Waa in la ogaadaa in ninku yahay inuu fahmo nooca iyo sida lagama maarmaanka u yahay xiriirka haddii uusan fahmin in haweeneydu ay leedahay saaxiibo, xiriirku meelna uma socdo.
Rag badan ayaa jecel inay u galmoodaan lamaanahoodii hore burburka kadib. Waana inay raggu dhageystaan. Ragga waxay ku dadaalaan inay fiiro gaar ah u yeeshaan lammaanahooda haddii ay ku sugan yihiin xiriir rasmi ah. Si kastaba ha noqotee, raggu waxay door bidaan intaanay gaarin barta intaysan wareerin. Xilliga ay haweeneydu hadlayso oo ay bilaabayso inay wareerto, markay runti arrinta gaadho, ninku horay ayuu gebi ahaanba u jaray.
Ragga maxay ka fikiraan? Shukaansi iyo jacayl
Taariikhaha ay raggu la leeyihiin dumarka kale waxay doorbidaan inay ku yeeshaan maqaayadaha. Inta badan dadka la wareystay waxay doorbideen inay aadaan maqaayada shaneemo ama tiyaatarka. Dhaqanku wuxuu ku sii adkaanayaa ragga markay tahay la kulanka dumarka. Waxay sidoo kale u maleynayaan inay saaxiibo la noqon karaan. Ragga badankood waxay jecel yihiin inay xiriir la yeeshaan lammaanahoodii hore burburka ka dib maxaa yeelay, marar badan, aragtida oo dhami way fiicnayd haddii ay ka beddelan lahaayeen saaxiibtinnimo. Kaliya koox rag ah oo la xushay ayaa doorbidaya inaysan waxba haysan maxaa yeelay waxba kama oga lamaanahoodii hore markay ka tageen.
In kasta oo ay dadku u malaynayaan oo ay leeyihiin dhaqan ah in ninku doonayo inuu noqdo masruufka reerka, ma aha sidaas. Raggu ma rabaan inay noqdaan kuwa reerka u quudiya. Fikradda qadiimiga ah ee baroonku waxay ahayd sida ugaadhsadaha iyo ku guuleysta rootiga siiya quudinta qoyska haweenku u yihiin haweeneyda guryaha leh. Tani waxay umuuqataa inay marba marka kasii dambaysa sii dhaceyso. Ragga badankood wax dhib ah kuma qabo xaasaskiisa inay guriga keenaan lacagta ay ku masruufayaan. Waxaa laga yaabaa in bayaankan ragga lagu shaabadeeyo caajis. Tani ma aha sidaas oo dhan.
40% ragga ma jecla inay ka fikiraan galmada markay culeys qabaan. Waxa ku faafay ragga waa inaan si joogto ah uga fikirno galmada. Waa arin faraha ka baxday. Raggu kuma fikiraan kaliya galmada iyo labo dhaha waan ka fikiraa. Waqtiyada walaaca, daalka ama kacsanaanta, waxay doorbidaan nooc kasta oo galmo ah madaxooda, mana doonayaan inay xiriir la yeeshaan haweenka ka weyn 40 ama kuwa aadka u bislaaday.
Ragga iyo ballanqaadka
Ragga waxay doorbidaan inay la noolaadaan lamaanahooda guurka kahor. Mana aha inay tahay wax aan caqli gal ahayn. Maanta waxaad isku dayeysaa inaad hubiso haddii lammaane shaqeynayaan kahor moodada. Ragga waxay doorbidaan inay tijaabiyaan xiriirka kahor intaanay dhex marin meesha allabariga. Kahor intaadan tallaabada weyn qaadin, waa inaad ogaataa waxa sugaya mid kasta kahor inta uusan dambiga gelin.
Sidaad aragto, ninku waa wax ka adag waxa bulshada u soo bandhigto eexdeeda. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan waxa ragga ka fekeraan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Ragga maxay ka fikiraan?
Ninku muxuu ku dhahaa markuu ku jecel yahay